सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई नै समाप्त पार्ने काम गरेको छः व्यवसायी रवि सिँह (भिडियाे अन्तर्वार्ता)
जनतापाटी डेस्क आइतबार, जेठ २६, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०७५ को संशोधनको माग गर्दै यतिखेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासँघ चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । खरिद ऐनको छैटौँ संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनरत व्यवसायीहरुले विभिन्न आन्दोलन गरिसकेको अवस्थामा सरकारले भने उनीहरुको माग सम्बोधनमा खासै पहल गरेजस्तो देखिँदैन । यतिखेर उक्त फाइल प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा पुगेको छ । आफुहरुको माग पुरा नगरे साउन १ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने र निर्माणका काम ठप्प पार्ने व्यवसायीहरुको तयारी छ । सरकारले भने व्यवसायीहरुले निर्माणको काममा लापरवाही गर्न खोज्नेलाई कारबाही गरिने बताउँदै आएको छ भने ऐन संशोधन नगर्ने मनस्थितीमा छ । यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुको चरणबद्ध आन्दोलनको औचित्य के हो ? अब निर्माण व्यवसायीहरु कसरी अघि बढ्नुलाई ? यी र यस्तै विषयमा रहेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासँघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग जनतापाटी डटकमका पंकज धामी र परिवर्तन देवकोटाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ महासँघका अध्यक्ष सिँहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सार्वजनिक खरिद ऐन २०७५ संशोधन गर्ने विषयमा पहिले नै सरकारसंग सम्झौता गरिएको थियो तर आउँदा किन विरोधमा उत्रनुभयो ?
हामीले खरिद ऐन नियमावलीमा भएको जटिलताहरु हटाएर पूर्वाधार उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गराउन तथा समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि पूर्वाधार उद्योगलाई पनि समृद्ध बनाउन पर्छ । पूर्वाधारमैत्री, निर्माण व्यवसायमैत्री कानुन आउनुपर्‍यो भनेर हामीले सरकारसँग माग गरेका हौँ । पूर्वाधार विकासका लागि यी यी कुराहरु बाधक छन् भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका हौँ ।
राष्ट्रिय भेला नै गराएर हामीले सरकारलाइ सुझाव दिएका थियौँ, त्यसमा माननीय भौतीक पूर्वाधार एवम् यातायातमन्त्री रघुविर महासेठले हाम्रा मागका विषयमा सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको थियो । हामी निर्माण व्यवसायी मात्र हैन, शेयरहोल्डर, नेपाल सरकारका विज्ञहरु तथा विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु, इन्जिनियरहरु लगायत सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरेर संशोधन गर्न आवश्यक सुझावहरु दिएका हौँ । यो हाम्रो पेशा बढोत्तरीका लागि नभई निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न र समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको सपना साकार बनाउनका लागि हामीले ७७ वटै जिल्ला संघका अध्यक्ष, महासचिव र सातवटै प्रदेश महासंघका अध्यक्ष, कार्यसमिति सबै मिलेर सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ ।
माननीय भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठले हामीलाई सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै सुझाव अनुरुप नै काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । तर उहाँले प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि उहाँले चाहेर/नचाहेर खरिद नियमावली निर्माण उद्योग प्रतिकुल आयो । यसले त निर्माण व्यवसायीहरुलाई समाप्त गर्नेगरी एउटा क्लज आयो । त्यो क्लज के हो भने, हिजो हामीले गरेको ऐन नियमावली अनुसारको सम्झौतामा नयाँ सम्झौता कुल समयको ५० प्रतिशतभन्दा बढि समय थपिनेछैन ।
यो क्लज अब आउने प्रोजेक्टहरुलाई इफेक्टिभ भएको भए त हाम्रो विरोध हुँदैन थियो । हामीले सक्ने भए त्यो काम लिन्थ्यौँ नसक्ने भए लिँदैनथ्यौँ । तर हिजो हामीले पुरानै ऐन नियमअनुसार गरिएको सम्झौतामा त लगभग २५ सय भन्दा बढि आयोजनाहरुको म्याद ५० प्रतिशतभन्दा बढि सम्पन्न भैसकेको छ । अब त्यो आयोजनाहरु के हुने ? तोडिने ? हामीले गरेको भुक्तानी नपाउने ? अब के ती २५ सय आयोजनाहरुमा संलग्न निर्माण कम्पनीहरु कालोसुचीमा जाने ?
यदि २५ सय आयोजनाहरु तोडीने हो भने नेपालमा सक्रिय रहेका निर्माण व्यवसायीहरु कुनै पनि बाँकि बस्दैनन् । सबैजना एक वर्षदेखि लिएर ३ वर्षसम्म कालोसुचीमा बस्नुपर्छ । त्यसैले यस्तो नियमावली आउँदैछ भनेपछि हामीले सरकारलाई सर्तक गरायौँ, सजग बनायौँ, खबरदारी गरायौँ । त्यति गर्दागर्दै पनि खरिद नियमावली आयो । आज मुलुक ठप्प छ ।
हामीले टेन्डर गर्ने अवस्था छैन । हामीले गरेको कामको भुक्तानी पाएका छैनौँ । अहिले हामीलाई कस्तो समस्या छ, हामीले मजदुरलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रा कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ । देशको अर्थतन्त्रमा नै एउटा ठुलो समस्या देखिएको छ । यहाँ १० लाखको काम गर्ने पनि निर्माण व्यवसायी छन्, १०/२० करोडको काम गर्ने पनि व्यवसायी छन् । त्यो बजेट भनेको जनताको रकम हो । हामीले १०/१५ प्रतिशत ‘सेभ मनी’ राखेर, बाँकी ८०/९० प्रतिशत बैंकबाट लोन लिएर ईक्विप्मेन्टहरु किनेका छौँ । हामीले आयोजनामा लोन उठाएका छौँ ।
यदि त्यो पैसा भुक्तानी भएन भने त हामीले बैंकलाई पनि भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ । बैंक धरासायी भयो भने आम जनताको निक्षेपमा समस्या आउँछ । यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समस्या आउने काम केटाकेटी पाराले सरकारले ल्याउनु हुँदैन थियो । हामीले खबरदारी गर्दागर्दै ल्याएपछि यसमा हामी चित्त दुखाई पनि छ भने घोर आपत्ती पनि छ ।
यो ऐन ल्याउँदा सरकार र निर्माण व्यवसायीबिच छलफल भएन र ?
यो निरंकुश शैलीमा आएको छ । सरकारले कुनैपनि ऐन नियमावलीहरु ल्याउने भएपछि सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल त गर्नुपर्छ नि । ऐनबाट फाइदा के बेफाइदा के भन्ने त सोच्नुपर्छ नि । यो ऐन नियमावली त कस्तो मान्छेले ल्यायो भने, जसले यो काम गर्र्नै जानेको छैन । जसलाई यो कामको विषयमा ज्ञान नै छैन, त्यस्ता व्यक्तित्वहरुले यो कानुन ल्याए । त्यसैकारण पनि यो गलत भएको छ । त्यहि कुरालाई खबरदारी गर्नका लागि अहिले हामी अभियानमा जुटेका छौँ ।
हामी आन्दोलित छौँ । हामीले कुनै पनि ठेक्कामा भाग लिन पाएका छैनौँ । हामीले जेठ १४ देखि सबै ठेक्काहरु बहिस्कार गरेका छौँ । यस्तो अवस्थामा मुलुक गएको छ । हामीले मुलुकलाई असहयोग गरेका होईनौँ । यस्तो परिस्थिती मुलुकले जन्माईदियो कि, हामी अब टेण्डर हाल्नै सक्दैनौँ । विगत पाँच वर्षको औसत निकालेर त्यसको चार गुणासम्मको ठेक्कामा मात्रै हामीले भाग लिन पाउने भन्ने छ । अहिले हामीसँग भएको विगतको कामहरु जोड्ने हो भने त्यो चार गुणा औसत भएको भन्दा बढि नै भएको कन्ट्याक्टरहरु हामीसँग छन् ।
सँगसँगै सक्रिय अधिकाशं कन्ट्रयाकरहरु ५० प्रतिशतभन्दा बढि म्याद गुज्रेका ठेक्काहरु छन् । हामी अहिले आर्थिक रुपमा छिन्नभिन्न छौँ । हामीले आगामी दिनमा हाम्रो लेवर, इन्जिनियरहरुलाई के काम दिने ? अस्तव्यस्त भएको छ मुलुक । जसले खरिद निमावली ल्याउनुभयो उहाँले हामीसँग राय सल्लाह पनि लिनुभएन र हामीले उहाँलाई लिखित रुपमा राय सल्लाह दिएका थियौँ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुभएन । यस बारेमा सतर्क गराउनको लागी हामीले सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्युलाई पनि लिखित रुपमा ज्ञापन पत्र पेश गरेका थियौँ ।
हामीले अर्थमन्त्री ज्युलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ । मन्त्री रघुविर महासेठ ज्युलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ, उहाँ त कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो । उहाँले कन्भिन्स गर्न कोशिस गर्दागर्दै पनि यस्तो नियमावली आयो । हामीलाई डर के छ भने भविष्यमा यस्ता मान्छेहरु हावी भए भने र ऐनमा पनि यस्तो व्यवस्था भयो भने मुलुक कता जान्छ ? मुलुकको अर्थतन्त्रको जिम्मा कस्ले लिन्छ ?
सार्वजकि खरिद नियमावलीको कुनकुन बुँदामा तपाईहरुको असन्तुष्टी हो ?
एउटा, भईरहेको आयोजनामा ५०प्रतिशत म्याद थपको कुरा छ त्यो हुनुभएन । अर्काे, २ अर्ब सम्मको काममा विदेशी आउन नदिने भनेको छ, यो एकदम स्वागत योग्य छ । यसले नेपाली निर्माण उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । साथै भविष्यमा नेपाली निर्माण व्यवसायीले विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । सँगसँगै सरकारले के गरिदिनु पर्‍यो भने, हिजोको दिनमा यस विधिमा भएको व्यवस्था सिभिलर नेचर सोहि प्रकारको काम गरेको सर्टिफिकेट ८० प्रतिशत माग्ने गरेको छ, त्यसलाई घटाएर ४० प्रतिश गरिदिनुपर्‍यो । यसो भयो भने मात्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुन्छ । नत्र भने २ अर्बको काममा विदेशी नआउने भए १ अर्ब ६० करोड सर्टिफिकेट भएका निर्माण व्यवसायीहरु एकदम कम छन ।
५/६ जना मात्र छन । उनीहरुले कार्टेलीङ गर्छन् । त्यसैले ०.४ भन्दाखेरि २ अर्बको काममा ८० करोडको सर्टिसफिकेट पुग्ने भयो भने बल्ल स्वच्छ प्रतिसपर्धा हुन्छ र नेपाली निर्माण उद्योगको विकास पनि हुन्छ । भारतमा ५० प्रतिशत सर्टिफिकेट माग्ने गरिन्छ । नेपालले चाँडै विकास चाहेको छ, त्यसैले यसलाई ४० प्रतिशत गर्नु पर्छ, यो भयो भने सरकारले २ अर्ब गरेको सार्थक पनि हुन्छ, निर्माण उद्योगको विकास पनि हुन्छ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । निर्माण व्यवसायीले काम पनि पाउँछन । सरकारले अहिले ल्याएको नियमावलीको ३८ वटा बुँदामा ३३ वटा बँुदालाई हामी सहर्स स्विकार गर्छाैँ ।
सरकारले विगत ५ वर्षको औसत निकाल्छ त्यसको ४ गुणा भनेको छ, त्यसमा पनि हाम्रो गुनासो छैन । माग र पुर्तिलाई फुलफिल गरेर ४ गुणालाई पछि ५ गुणा गर्ला या घटाएर ३ गुणा गर्ला यो हामी सरकारलाई नै दिन्छौँ । तर एउटा व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारलाई हनन गर्ने गरेर यो सरकारले के गरेको छ भने एउटा फर्म/कम्पनी कालो सुचीमा पर्‍यो भने त्यो फर्म/कम्पनीका सञ्चालकहरु मध्ये कोही अर्काे र्फम/कम्पनीमा छन भने त्यो कम्पनीले पनि कारोबार गर्न नपाउने भनेको छ ।
एउटा फरक अस्तित्व बोकेको फर्म/कम्पनीले काम गर्न नपाउने त हुनुभएन नि । एउटा बैंकमा १ लाख सेयर होल्डर होला, एउटा बैंकलाई कालो सुचीमा राख्यो भने के त्यो १ लाख सेयर होल्डर भएको अर्काे बैंक पनि कालो सुचीमा जाने ? दाईले भ्रष्टचार गर्‍यो भने भाइले पनि कसुर भोग्ने ? त्यो कुरा गलत छ भन्ने भनाई हो हाम्रो । यदि कुनै फर्म/कम्पनीले गलत काम गरेको छ भने उक्त कम्पनीलाई सजाय दिनु पर्छ तर त्यो कम्पनीमा सदस्य भएको अर्काे कम्पनीलाई यसको असर हुनुभएन । यसलाई सच्याउनु पर्छ ।
अर्काे कुरा के भएको छ भने, एउटा कुनै सार्वजनिक निकायले एउटा कम्पनीलाई कालो सुचीको लागि सिफारिस गर्‍यो भने खरिद अनुगमन कार्यलयले त्यसको निर्णय गर्छ । सार्वजनिक निकायको गल्ति छ या कम्पनीको गल्ति छ । यदि सार्वजनिक निकायको गल्ति छ भने सफाई दिन्छ, र यदि खरिद कम्पनीको गल्ति छ भने खरिद अनुगमन कार्यलयले त्यसलाई १ वर्ष देखि ३ वर्षसम्म कालोसुचीमा राख्ने प्रावधान छ । अहिलेको नियमावलीमा के छ भने कुनै कम्पनीलाई कार्यलयले सिफरिस गर्ने बित्तिकै उसले अर्को काममा खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउदैन । यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित भयो ।
यदि कम्पनीले सफाई पायो भने बिचको अवधीमा पाउने अवसरबाट वञ्चित हुन्छ । त्यसैले यो कम्पनीलाई धम्काउने काम हो । फर्म/कम्पनीले जहिले पनि त्रसित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको कसुर भेटिएमा मात्र कम्पनी कालोसुचीमा पर्नुपर्छ, सिफारिस हुँदैमा कम्पनी कामबाट वञ्चित हुनुहुदैन ।
ठेक्का सम्झौतामा अग्रिम भुक्तानीको विषयमा पनि विवाद हो ?
आम जनमानसमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गर्ने, पेश्की बुझ्ने र कान नगर्ने भन्ने बुझाई छ, जुन ९५ प्रतिशत गलत हो । किनभने कुनै पनि निर्माण कम्पनीले आफुले काम जिम्मा लिएपछि त्यो काम सम्पन्न नभएसम्म उसले त्यसको दायित्व बहन गर्छ । पेश्की उसले काम पाए बापत पाउने हैन कि, उसले काम पाएपछि त्यो काम सम्पन्न गर्नका लागि बैंकलाई साक्षी राखेर पेश्की लिन्छ । त्यो पेश्की पनि एकमुष्ठमा नभई दुई किस्तामा दिईन्छ ।
अधिकतम २० प्रतिशत दिने हो नभए धेरै कम्पनीहरुले १५ प्रतिशत या १० प्रतिशत दिन्छ । १५ प्रतिशत दिनेले सुरुमा साढे सात प्रतिशत दिन्छ, त्यस्तै १० प्रतिशत दिनेले एक किस्ता ५ प्रतिशत दिन्छ भने अर्को ५ प्रतिशत दिन्छ । २० प्रतिशत दिनेले १० प्रतिशत दिन्छ सुरुमा । सुरुमा सम्झौता गरेपछि उसले आफ्नो वर्क सेड्युल दिने, इन्स्योरेन्स दिने गर्छ । त्यसपछि काम सुरु भएर केही काम सम्पन्न भैसकेपछि मात्रै अर्को १० प्रतिशत दिने प्रावधान छ ।
तर नेपालमा प्रचलन कस्तो छ भने, आयोजनाहरु अत्याधिक बन्ने, राजनैतिक दवावमा आयोजना बन्ने र हामीसँग भएको सिमित बजेटबाट असिमित आयोजनाहरु बन्ने । जस्तो कि, एउटा आयोजना २५ करोडको छ भने यो वर्ष डेढ करोट बजेट राख्ने, अर्को वर्ष ३ करोड र अर्कोपटक ४ करोडराख्दै गयो भने यो काम गर्न क्रमश ८/१० वर्ष लाग्छ । भुक्तानीकै कारण आयोजना सम्पन्न गर्न यति धेरै समय राख्छ । आम जनमानसमा के धारणा देखिएको छ भने, निर्माण कम्पनीले काम चाहिँ हातमा लिने तर काम सम्पन्न नगर्ने भन्ने छ ।
धेरै जसो भुक्तानीका कारणले आयोजना रोकिएको अवस्था छ । यससँगै जग्गा विवाद पनि हुन्छ । कतिपय समयमा वनमा विवाद हुन्छ । यस्तै यावत कुराहरुलाई खरिद नियमावली ऐनले सम्बोधन गरेको छ । नियमावलीका ३३ वटा बुँदाहरु राम्रा छन् । बाँकी ५ वटा कुराहरु यस्ता छन् कि, तिनीहरुले नै ३३ वटा बुदालाई गौण बनाईदिएको छ । यी बुँदाबाट त हाम्रो अस्तित्व नै मेटाउने काम भएको छ । त्यसैले हामी आन्दोलनमा छौँ ।
मोबिलाईजेसनको कुरा पनि आइरहेको छ, यसलाई बन्द नै गरिदिए निर्माण व्यवसायीलाई कस्तो असर पर्छ ?
निर्माण कम्पनीले जति चाँडै काम गर्यो त्यति नै उसको लागत कम पर्छ । भोलिको दिनमा एउटा कम्पनीले १२ महिना काम गर्दा उसको ओभरहेड खर्च ५ प्रतिशत छ भने ०.४ हुन्छ । त्यसैलाई बढि समय लगायो भने ओभरहेड खर्च बढेर ०.७ हुन्छ । त्यसैले कुनैपनि कम्पनीले काम लम्ब्याउन खोज्दैन । विभिन्न वाध्यताले गर्दा काम लम्बिन्छ । र त्यहाँ के हुन्छ भने, जग्गा विवाद भएपछि निर्माण कम्पनीले आफ्नो ध्यान अन्यत्रै मोड्छ । अन्त अर्को काममा व्यस्त हुन्छ । यीनै झमेलाका कारण यस्ता विवादहरु उब्जिएको छ । त्यो कुरामा सरकार पनि सच्चिनुपर्छ र हामीपनि सच्चिनुपर्छ ।
काम नै बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिनु जायज हो त ?
हामीले अहिले काम बन्द गरेका छैनौँ । हामीले जेठ २२ गते असार मसान्तसम्म सरकारलाई खबरदारी गर्दै सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यति गर्दागर्दै पनि सरकार सच्चिएन भने, सच्चिन खोजेन भने हामीसँग विकल्पै छैन नि । अर्को आर्थिक वर्ष पनि सुरु हुन्छ । यो आर्थिक वर्ष त हामीले गुमायौँ गुमायौँ । अर्को आर्थिक वर्ष पनि काम गरेर फेरी हामीले भुक्तानी नपाउने अवस्था किन ल्याउने ?
त्यसैकारण हामीले सरकारलाई अहिले नै सचेत गराएका छौँ । हामी विकासका सम्बाहक हौँ । विकास निर्माणका कार्य बन्द हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अहिले हामीले जति पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छौँ । ती सबै शान्तिपूर्ण छ । कहीँ सडक अवरुद्ध छैन । कहिँ सडक जाम गरेका छैनौँ । हामीले सकेसम्म हाम्रो क्रियाकलापले आम जनतालाई असुरक्षा वा असहज नहोस् भन्ने हिसाबले नै काम गरेका छौँ । त्यति हुँदाहुँदै पनि केही असुविधा त भयो होला, त्यसको लागि म आम जनसमुदायसँग क्षमा प्राथि छु ।
यो हाम्रो रहर होईन बाध्यता हो । सरकारलाई हामीले खबरदारी गर्न थालेको फागुनदेखि हो । यतिबेलासम्म पनि सरकाले हामीलाई सुन्न नचाहनु दुःखद् छ । त्यसैकारण हामीले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्‍यौँ । हामीले २/३ दिन भित्रैमा इजाजत पत्र माननिय भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठलाई बुझाउँदै छौँ । त्यसपछि खरिद अनुगमन कार्यालयमा धर्नाको कार्यक्रम राख्छौँ । यस्तै कार्यक्रम असार मसान्तसम्म गर्छौँ । यति गर्दागर्दै पनि सरकार सच्चिएन भने हामीले बाध्य भएर सडकमै आउनुपर्छ, भगवानले सरकारलाई शिक्षा देओस्, हामील सडकमा आउनु नपरोस् ।
समयमा काम नगर्ने कर्मचारी अझै भनौँ निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकारले ऐन ल्याउँदा तपाईहरुको आन्दोलनले काम नगर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्न खोजेजस्तो भएन र ?
हिजो मुलुकमा मुलुकी ऐनमा १८ वर्ष पुगेपछि विवाह गर्न पाईन्छ भनेको थियो । तर अहिले मुलुकी ऐनमा के परिवर्तन गरिएको छ भने, त्यो विवाह गर्ने उमेर २१ वर्ष पुग्नुपर्ने गरिएको छ । पहिला १८ वर्ष पुगेर विवाह गरेकाहरु सबै अब कानुनी दायरामा आउने त ? यस्तै, हिजो ५० प्रतिशत मात्रै म्याद थप गर्ने भन्ने व्यवस्था त थिएन नि । हामीले नयाँका लागि भनेका छैनौँ नि । हिजोको लागि भनेका हौँ ।
हिजो हामीले गरेको सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार हामीलाई समय दिनुपर्‍यो । र समयपनि त्यो आयोजनालाई प्राविधिक हिसाबले कति आवश्यक पर्छ ? एकपटकको लागि त्यो म्याद थप गरिदिनुपर्‍यो । सरकारले पनि आफुले गर्ने कर्तव्यहरु पुरा गर्नुपर्‍यो । जस्तो कि, सरकारले भुक्तानीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो, आयोजनामा चाहिने जग्गा सरकारले लिईदिनुपर्‍यो । त्यो जग्गामा अन्य कुनै कमिकमजोरी हुनदिनुभएन नी । अनि बल्ल हामीले काम गर्न पाउँछौँ नि । त्यसैकारण सरकारले कडा गर्ने, दण्डित गर्ने नाउँमा समाप्त पार्नुभएन । सरकारले असल अभिभावकत्व देखाउनुपर्‍यो ।